Maxaa ka cusub Koofurta gobolka Mudug? - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Maxaa ka cusub Koofurta gobolka Mudug?
November 25, 2018 November 25, 2018 admin608
Waxaa dhaqdhaaq ciidan laga dareemaya koofurta gobolka Mudug, xalay ayaa magaalada Cadaado waxaa ka baxay ciidan ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya, ciidankan oo watay dhowr gaadiidka dagaalka ayaa gaaray magaalada Wisil, sidoo kale halkaas waxaa gaaray ciidamo kale oo ka kala yimid Hobyo iyo Gaalkacyo.
Ujeedada socodka ciidanka iyo halka ay ku wajahan yihiin ayaanan wali cadeyn, waxaana kasoo baxaya warar kala duwan, ciidanka ayaa la sheegay in ku baxeen amarka wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya, Waxaana suurtagal ah in saacadaha soo socda ka ruqaansadaan Wisil oo ay hadda ku sugan yihiin.
Duqeynta diyaaradaha Maraykanka ayaa ka joogsatay maalmihii la soo dhaafay Koofurta Gobolka Mudug, waxaana la sheegaya in Alshabaab duqeyntii Todobaadkii hore ku waayeen in ka badan 100 Askari, halka dhaawacu intaas ka badan, goobaha la duqeeyey ayaa ahaa saldhigyo alshabaab, halka qaarkood ay u ahaayeen goobo keydka hubka.
ilo xog-ogaal ah ayaa inoo xaqiijiyey in ciidamo badan oo Alshabaab ah ay ka aag badasheen goobihii la duqeeyey waqooyiga Xarardheere, iyagoo badankoodu u wareegay koofurta Xarardheere oo sidoo kale ah goobo istaraatiiji ah. Dadka deegaanka ayaa soo dhaweeyey duqeynta loo geystay Alshabaab, iyagoo dhibaato badan kala kulmay Alshabaab deegaanadaas xoogga ku haysta.
5 Musharax oo u tanaasulay Mukhtaar Roobow